Nke 'a bụ ihe ọzọ di mma ana m' ekewu. Anọ m na-agbasi mbọ ike na-ekwu okwu banyere ego crypto mana ufodu ndi mmadu chere na m di nzuzu banyere ya(technology )ma ọ bụ n'ihi na m bụ komputa sayentist maka ịhụnanya m nwere maka teknụzụ a na-ejide m. Mba! nke ahụ abụghị ihe kpatara ya. Ana m ewe iwe maka ego na akụnụba anyị na mba Naijiria a. Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ anaghị agụ akwụkwọ iji mara na eji ugwo nweta naira anyi, ya mere, idebe ya agaghị eme ka ị baa ọgaranya, kama ọ ga-eme ka ị ịda ogbenye. Ọtụtụ n'ime anyị kwesịrị ịmara na ego dị na ụlọ akụ anyị agaghị eme ka ị nwe ego n'efu. ọ bụ ike agbụ. I debe ego na ụlọ aku agahi amutara gi mmagi obula ka ma ha ewere ego i tara ahụhụ kpata binye mmadu ma nwere ụrụ di n' ime ya. Enweela ọtụtụ ndị na-eche na ị kpakoba NAIRA ga-eme ka ha bụrụ “Robert” ma ọ bụ “Donald Trump” nke oge anyị. Ha na-ekwu ihe dị ka; ọ bụghị ego ole ị nwere kama ole ị na akpakoba! ana m aza ọtụtụ oge, ma ọ bụrụ na ịchek